Digital Patrika – १० वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौंको मतगणना पाँचवटा स्थलबाट गरिने
१० वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौंको मतगणना पाँचवटा स्थलबाट गरिने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले काठमाडौंको १० वटा क्षेत्रको मतगणना कार्य ५ वटा विभिन्न मतगणना स्थलमा गर्ने जनाएको छ । एक स्थानमा मात्रै मतगणना गर्दा निकै समय लाग्ने भन्दै ५ वटा स्थलबाट मतगणना हुने जनाएको हो ।
दोस्रो चरणमा चुनाव हुने ४५ जिल्लामा १५ हजार ३ सय ४४ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । काठमाडौं जिल्लाका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रको मतगगणना पाँच ठाउँमा हुनेछ । काठमाडौंका मुख्य निर्वाचन अधिकृत रमेश पोखरेलका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र नं. १, २, ३ र ४ राष्ट्रिय सभागृहमा मतगणना गरिने छ भने निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ र ७ को सहकारी विकास विभागको तालिम केन्द्र बानेश्वरमा मतगणना हुने जनाइएको छ । त्यसैगरी, निर्वाचन क्षेत्र नं. ९ र १० अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँबानेश्वरमा मतगणना हुनेछ । निर्वाचन क्षेत्र नं. ८ को वन परिसर बबरमहलमा र निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ को जिल्ला समन्वय समिति बबरमहलमा मतगणना हुने तयारी भएको छ । आयोगबाट काठमाडौंका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक निर्वाचन अधिकृतसहित ५ हजार ८४८ कर्मचारी खटिएका छन् । काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा ७ सय ३१ मतदान केन्द्र र ३ सय ९ मतदानस्थल रहेका छन् । १० निर्वाचन क्षेत्रमा कुल मतदाताको संख्या ६ लाख ३० हजार ४६० छ । काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाका १ सय ७१ उम्मेदवार रहेका छन् । यसैगरी प्रदेश सभा (क) मा १ सय ७ र प्रदेशसभा (ख)मा १ सय १५ उम्मेदवार रहेका छन् ।